Ukuhambelana kwe-Ox kunye nenyoka: Ulwalamano oluhambelanayo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kwe-Ox kunye nenyoka: Ulwalamano oluhambelanayo
Ukuhambelana kwe-Ox kunye nenyoka: Ulwalamano oluhambelanayo
Isibini esenziwe nge-Ox kunye neNyoka sinokuguqula kubambiswano olukhulu ukuba bobabini bakulungele ukuyekisa izinto ezimbalwa. Xa bekunye, aba babini banokonwaba kakhulu kwaye bonwabele ubudlelwane obuzinzileyo.
Iinyoka zinobuhlobo kakhulu kwaye zinengqondo evulekileyo, ke zinokwenza i-Oxen iphume kwigobolondo yayo kwaye inxibelelane ngakumbi nabanye. Ngapha koko, aba babini banokuvana kakhulu kuba bobabini bayathanda ukuba nekhaya elinethezekile kwaye bevela emsebenzini baye kusapho olubathandayo.
Iikhrayitheriya I-Ox kunye neNyoka yokuhambelana kweNyoka
Ngelixa iinyoka kunye ne-Oxen zisenokungafani xa kufikwa kubuntu babo, ngokuqinisekileyo baneenkolelo ezifanayo kunye neendlela zokujongana nobomi. Umzekelo, bobabini bayathanda ukucinga kwaye banomdla kwizinto ezikumgangatho ophezulu, endaweni yobuninzi kunye nezihlwele ezinengxolo. Ngelixa bobabini banyanzelisa ukuba izinto zenziwe ngendlela yabo, ukuhambelana phakathi kwabo kusomelele.
Ukusebenza ukusuka kwizithunzi
I-Ox kunye neNyoka zenza indibaniselwano elungileyo kakhulu kuba iinyoka ziyazithanda izinto kwaye ziyayithanda inyani yokuba i-Oxen inokubabonelela. Ukubuya, abo bamva bacinga ukuba abantu bangaphambili bonwabile kwaye banezakhono zokujonga.
Kubonakala ngathi le miqondiso mibini iyaphelelisana njengoko i-Oxen ingakhathali ngenkxaso enokunikelwa yiNyoka, ngelixa iinyoka zinelunda ngokuba nomntu onje nge-Oxen.
ungazi njani xa umntu oyithandayo ekuthanda
Xa beqala ukuzijonga, uninzi aluyi kunika ubudlelwane babo ithuba lokubona i-Ox ihlala iqondile kwaye iNyoka ikhetha ubuqili.
Ngelixa amanani othando e-Oxen kunye nokusekela izimvo zabo kwiinyani, iinyoka zinomdla kwaye zikhetha ukuvumela iimvakalelo zibalawule. Nangona kunjalo, emva kokujonga ngononophelo kwindlela izinto eziguquka ngayo phakathi kwabo, kunokugqitywa ngokulula ukuba ngabantu ababini abathandanayo kakhulu.
Mhlawumbi konke oku kunento yokwenza nento yokuba bobabini bonwabele ukusebenza kwizithunzi. Akunakwenzeka ukuba ufumane i-Oxen okanye iinyoka zilwela ukubonwa okanye ukuba nomdla kwizinto ezingaphezulu.
Bobabini bajonge ukuba nemvelaphi kwaye bathathe ubomi ngokungathí sina. Kuya kubakho amaxesha apho i-Oxen iza kuba nomona kuba iinyoka zinokubenza bazive ngolu hlobo. Esona sisombululo sisiso kule meko kukuba i-Oxen ibe nezinto zokuzonwabisa ezaneleyo kunye nezinto abanomdla ezibagcina bexakekile.
Xa unento yokwenza, i-Oxen inokuyijonga into yokuba iinyoka zikhohlisa kwaye zihlala zitsala abantu abanjengoomazibuthe. Ngapha koko, iinyoka ziya kufunda ukuba ukudlala ngothando nabanye akubaziseli nto kwaye kuphela yi-Oxen enokubonwabisa.
Ebhedini, i-Oxen ifuna iintlobo ezininzi okanye ziyadika. Oku kulungile kwiinyoka kuba aba bantu bathanda ukuphonononga izikhundla kunye nezitayile ezintsha, ke uthando phakathi kwaba babini aluyi kuba buthuntu nangayiphi na indlela.
Xa kuziwa ekukhetheni iqabane, zombini iinyoka kunye ne-Oxen zikhethe kakhulu kwaye zithatha ixesha lazo ngaphambi kokuthatha isigqibo komnye umntu. Banamabhongo kwaye bakholelwa kwinto enye, aba babini ngabantu abathobekileyo.
Amandla abo adibeneyo anokuhambisa iintaba kwaye asebenze ngakumbi kunaleyo banayo bebodwa. Ngexesha, iinyoka zinokufunda ukuthembela kwi-Oxen kunye nokubaxhasa kuyo yonke into abayenzayo.
Esi sisibini apho amaqabane anokuthembela omnye komnye xa kufikwa kumaxesha anzima, ke ubomi babo kunye buya konwaba kakhulu. I-Oxen ngabantu abazinzileyo ekuxhomekeke kubo abanye, nto leyo eya kwenza ukuba iinyoka zizive zikhuselekile xa zibangqongile.
Kulula ukuqaphela ukuba i-Oxen isebenza nzima kangakanani, ke aba babini bafunda izinto ezininzi malunga nobomi nomsebenzi. Ngelixa unomona, iinyoka azisoze zibe nesizathu sokukrokrela i-Oxen yayo nantoni na.
Xa bethandana, bobabini baya kuziva bengabancedisi kwinto enkulu kunabo. Bayancedisana, kwaye ingqalelo kunye nobumnandi obubonisa ubudlelwane babo buya kuba yinto abathembele kuyo njengesibini.
Zombini i-Oxen kunye neenyoka zifuna ukuxhasa iqabane labo, kwaye iinyoka zinokuba nebhongo elingakumbi lokujonga ukuba liqabane le-Ox elithembeke kangakanani. Kuqhelekile ukuba ngamnye kubo afune, kodwa abayi kuba nangxaki ngendlela omnye aqhuba ngayo kwaye baya kucinga ukuba bakhethe iqabane elifanelekileyo.
Abo bazama ukwahlula baya kujongana nabo bajongane nabo kuba i-Oxen okanye iinyoka azamkeli mntu ukuba angenelele kubudlelwane babo. Kulula ukuba iinyoka zenze i-Oxen ivuleke, ngelixa i-Oxen siyithanda into yokuba iinyoka zinomdla kwaye zilungile nefilosofi.
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 18
Xa indoda iyinyoka kwaye umfazi e-Ox, ukuyekisa okumbalwa kunokufuna ukwenziwa kuba wayeziva isidingo sokucwangcisa kunye nokuzinza, ngelixa enomdla kwaye efuna ukuhlala kulo mzuzu.
Xa indoda iyinkomo kwaye umfazi eyiNyoka, unokuba nomona kwaye angadlala ngothando nabantu abaninzi kakhulu. Ukuba baya kuqondana kwezi ndawo zokujonga, banokwenza ubudlelwane busebenze njengoko benomdlalo ofanelekileyo xa kufikwa kwigumbi lokulala.
Iimpawu zalo manyano
Xa kuziwa ekuphumleni nasekuphumeni, inyoka kunye ne-Ox ziyafana, oko kuthetha ukuba banokuba nexesha elimnandi kunye. Bobabini banomdla kwaye banomdla wokukholisa izivamvo zabo.
Ke ngoko, baya kuphuma baye kuzama ukutya okumnandi, basele iwayini ezigqwesileyo, bathenge iimpahla zexabiso kwaye benze yonke enye into emnandi ebazisela ulonwabo. Kuyenzeka ukuba babe nezinto ezininzi abanomdla kuzo.
Umahluko ophambili phakathi kwezi zimbini unokuba ngowenkcubeko kuba iinyoka zihlala ziingqondi, ngelixa i-Oxen inomdla wentuthuzelo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba babe nabahlobo abaqhelekileyo kwaye badibane kwitheko.
Ungayichazanga eyokuba bobabini bayakonwabela ukwenza izinto ezifanayo, ke banokuchitha ixesha elininzi bezalisekisa umnqweno wokulandela izinto ezifanayo. Njengokuba kunjalo, le yenye yezinto ebadibanisa kakhulu.
Xa kuziwa ekuhlaleni, iinyoka kunye ne-Oxen zineendlela ezifanayo kunye neembono. Akukho namnye kubo ofuna ukuphuma kakhulu, ke ukuba bahlala kunye, kunokwenzeka ukuba baya kubamba amaqela amaninzi kwaye bonwabe kwintuthuzelo yekhaya labo.
Bahluke kakhulu kwiiRats kunye neenkawu, abahlala beziva benesidingo sokufumana uxabiso kunye nokutshintshiselana ngezimvo nabahlobo babo ukuze izimvo zabo ziqinisekiswe.
I-Oxen ilumke kancinci xa isiza kwenza abahlobo abatsha kwaye bahlala behlawula kakhulu iqabane abalikhethayo, ifanitshala abayithengayo kunye nezilwanyana abazigqibayo.
Aba bantu bathanda ukuhlala phantsi kancinci kuba lixesha kuphela elinokubanceda benze izigqibo ezilungileyo ebomini. Oku kuthetha ukuba i-Oxen iya kuhlala inabahlobo bayo ukusukela ebuntwaneni kwaye ayizukufuna ukwenza ezintsha.
Bayakonwabela ukuhlala kunye nokuhlala kwiindawo eziqhelekileyo, ke ukuba umntu uthatha indawo ebomini babo, banokucaphuka kakhulu kwaye bakhathazeke.
Kungathethwa into enye ngeNyoka, kuphela kule meko yabemi, bafuna iindawo eziqhelekileyo kuba bahlala beziva bethuthuzelwa yimfihlo. Njengeenyoka kwilizwe lezilwanyana, ezi zikwi-zodiac zaseTshayina azikhwaza kakhulu kwaye zikhetha ukushiywa zodwa.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Okthobha 21
Yinto eqhelekileyo ukuba iinyoka zichithe iintsuku zazo zihleli elangeni, zimamele umculo okanye zifunde incwadi elungileyo. Abanaso esi sidingo sokurhangqwa ngabahlobo okanye ukwenza into evuselelayo.
Ukusuka kule ndawo yokujonga, i-Oxen kunye nabo bahlala kakuhle kakhulu. Aba babini abanakuze batyhalelane omnye komnye benze izinto abangazithandiyo, ukuze babe kunye nabanye.
Ngaphezu koku, bobabini banokwenyama, ke unxibelelwano lwabo lomzimba lunokuzaliseka kakhulu. Bayaluqonda ulwabelana ngesondo kubalulekile kwaye bazabalazela ukonwaba omnye nomnye ngezona ndlela zinomdla okanye ezilahlayo.
Njengaso nasiphi na esinye isibini, inyoka kunye ne-ox nayo inokukhula ibaleke ishiye enye kwenye. Umzekelo, banokufana kakhulu, bathule kakhulu kwaye bagcinwe, nto leyo enokubakhokelela ekubeni bangabi namdla kwinto abanayo kunye njengesibini.
Kuyenzeka ukuba uthando luphoswe kwaphela kunxibelelwano lwabo, kungoko banokufuna ukukhangela inkuthazo kwenye indawo okanye baya kuthi baphele bethatha iindlela ezahlukeneyo.
Eyona nto bayidingayo aba bantu bendalo kukuziva bekhuselekile ngokwasemphefumlweni, ngakumbi i-Oxen, ethanda kakhulu izinto eziphathekayo kwaye ifuna uzinzo ukuze izive wonwabile.
Akunakwenzeka ukuba ube yinto engathandabuzekiyo kunye ne-Oxen kuba abanako ukuvumela ukuba oku kwenzeke, enokuthi ibe yimeko eyahlukileyo kunye neenyoka, ezingacacanga njenge-Oxen xa kuthethwa ngothando.
Iinyoka zikhetha ukugcina izinto ezininzi malunga nabo babucala, ke zihlala ziyimfihlakalo kumaqabane abo e-Ox, abanokungonwabi kwaphela yile.
Ngelixa iinyoka zikwazi ukufudumala nobubele, abasavumeli abantu abaninzi ukuba babe ngabahlobo babo okanye bafike entliziyweni yabo. Oku kunokuba yingxaki kubudlelwane kunye ne-Ox, kuba le yokugqibela inqwenela ukuzibophelela ngokupheleleyo kunye neemfihlo zokutyhilwa.
Naluphi na ulwalamano lwe-Oxen lunokuchaphazeleka ngendlela engeyiyo ngenxa yokuba baneenkani kakhulu. Kanye njengesilwanyana esibaphawulayo, abanako ukwamkela ukujongana nezinto ezintsha kunye nokuthathela ingqalelo izimvo zabanye.
Kunzima ukukholisa u-Oxen ukuba enze izinto ngokwahlukileyo kunendlela esele bezazi ukuba bazenze ngayo. Ke ngoko, banokuba nekratshi kwaye bazive ngathi iqabane labo kufuneka linike yonke iminqweno yabo.
uyintoni umqondiso wangoNovemba 27
Ukuhambelana kothando lwe-Ox: Ukusuka ku-A kuye ku-Z
Ukuhambelana kwenyoka: Ukusuka ku-A kuye ku-Z
Uphawu lweSagittarius Sign
Umhlaza womhlaza: Igcisa leemvakalelo le-Chinese Western Zodiac
ijupiter kwitshathi ye-scorpio yendalo
Umhlaza wabasetyhini kunye ne-male leo
loluphi uphawu lwangoSeptemba 13
I-libra man leo ukuphononongwa kobudlelwane bomfazi